Shan shay oo ay tahay inaad sameyso maalin kasta si aad caafimaad u hesho | Bezzia
Susana Garcia | 06/04/2021 20:00 | Tilmaamaha caafimaadka, Caafimaadka
Caafimaad qabidda mararka qaarkood waa arrin nasiib ah, maxaa yeelay hiddo-wadayaasha wax badan baa ku xiran, laakiin sidoo kale waxay la xiriirtaa qaab nololeedka aan ku nool nahay iyo wax kasta oo aan sameyno. Tilmaam kasta iyo caado kasta waxay saameyn ku yeelataa jirkeena waxayna ku dambeysaa inay na saameyso, waqtiga dhow ama dheer, marka waa inaan maanka ku haynaa inay tahay inaan sameyno waxyaabaha qaar si aan u caafimaad qabno oo aan u horseedno nolol caafimaad leh oo noo oggolaaneysa inaan ku gaarno gabow qaab nololeed wanaagsan.
Waan arki doonaa Shan shay oo ay tahay inaad sameyso maalin kasta si aad u caafimaad qabtid mustaqbalka fog. Kani waa tartan masaafo dheer ah iyo astaamaha waawayn ee maalin ilaa maalinta xigta ee kaa dhigaya inaad fiicnaato waxtar maleh. Xaqiiqdi waa inaad wax sameysaa si aad nolol caafimaad leh uhesho. Waxyaalaha noocan ahi waa qayb ka mid ah hab nololeedkaaga waana tilmaam maalinle ah oo kuu oggolaanaya inaad naftaada daryeesho.
1 Nasasho nasasho leh
2 Cunto isu dheelitiran
3 Samee isboorti maalin kasta
4 Biyo cab
5 Ka fogow culeyska fekerka
Nasasho nasasho leh
Si aad uga soo kabato maalinba maalinta ka dambeysa oo aad u hesho nolol caafimaad leh, waxaa gebi ahaanba lama huraan ah in la nasiyo si jirka iyo maskaxdaba ay u bogsadaan. Tani caddeeyay in haddii aynaan si fiican u seexan aannu daal badan nahay, goos goos ah oo culeys la saaray. Marka maahan kaliya hurdo saacado cayiman, laakiin inta kale waa tayo. Isku day in wax kasta oo qolka ku jiraa ay ku habboon yihiin nasashada. Iska ilaali shaashadaha oo ha dhigin telefishanka, maxaa yeelay taasi waxay kugu keenaysaa inaadan si fiican u seexan. Maalgeli furaash wanaagsan oo kaa caawinaya inaad nasato oo aad tixgeliso heerkulka qolka. Waxaad ku caawin kartaa naftaada waxyaabaha sida urta nasteexo leh ama codadka kaa caawinaya inaad nasato. Diyaarinta booska ayaa muhiim ah, in kasta oo ay tahay inaad sidoo kale iska ilaaliso cashada weyn iyo jimicsiga waqtiga hurdada, maxaa yeelay way ku firfircoonayn doontaa. Haddii intaas oo dhan aadan si fiican u seexan karin, waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad la tashato takhasusle takhasus leh.
Cunto isu dheelitiran
Dhamaanteen waan ognahay waxa ay tahay cunno isku dheelitiran. Waa inaad qaadataa miraha iyo khudradda maalin kasta, marka lagu daro in laga fogaado cunnooyinka la warshadeeyay, maadaama ay iyagu yihiin kuwa ugu waxyeellada badan. Haddii aad rabto xoogaa xad-dhaaf ah, waa inay ahaataa oo keliya waqtiga oo aan ahayn maalin kasta. Maalinba maalinta ka dambeysa waa inaad cuntaa cunto fudud iyo cunto kala duwan adigoo iska ilaalinaya cusbada, baruurta ama sonkorta badan. Haddii aad barato inaad ku raaxeysato cunnada dabiiciga ah, waqti kadib uma baahnid inaad cuntid cuntooyin ay ku badan yihiin sonkor ama baruur waxaadna arki doontaa sida aad u fiicantahay. Cunto wanaagsan waxay naga caawineysaa inaan helno marin wanaagsan ee xiidmaha, fayo qabka iyo dheef shiidka wanaagsan.
Samee isboorti maalin kasta
Waxaa laga yaabaa ha u dareemin inaad sameyso isboorti degdeg ah maalin kasta, laakiin waad jimicsi kartaa oo waad dhaqaaqi kartaa maalin kasta. Waa muhiim inaad jimicsi sameyso xitaa haddii ay tahay inaad ku socoto xawaare wanaagsan, sameyso jimicsiyo qaarkood si aad u kala bixisid ama aad xoog u yeelatid. Waxa la xisaabtamayaa ma fadhiyo maalintii oo dhan ama waxba ma qabanayso, maaddaama xitaa tilmaamyada yaryar la tiriyo aakhirka waxayna naga caawinayaan inaan caafimaad qabno. Isku day inaad hesho waxa aad jeceshahay, samee noocyo isboorti oo aad ku raaxeysato.
In kasta oo ay run tahay in aan wada jecelnahay cabbitaannada sonkorta leh ama xitaa kuwa khamriga ku jira, runta ayaa ah in waxa ugu caafimaad qaba ee aan cabbi karno ay tahay biyo. Biyo cabidda maalin kasta aad ayey muhiim u tahay Hagaag, jirkeenu wuu ubaahanyahay. Waxaad sameyn kartaa faleebo adigoon sonkor ku darin, maadaama ay sidoo kale caafimaad qabaan, ama waxaad ku dari kartaa liin dhalada biyaha. Waxaas oo dhami waxay kaa caawinayaan inaad wax badan cabto oo aad siiso xoogaa dhadhan ah.
Ka fogow culeyska fekerka
Bulshadeena maanta tani waa mid aad u adag, laakiin waxaa lagama maarmaan ah in hoos loo dhigo heerarka culeyska fekerka aan wax soo saar laheyn ee aan ku qabno ama xitaa aan ku xanuunsan karno. The diiqaddu waa isha dhibaatooyinka oo haddaba waa inaan baranno sida loo xakameeyo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Caafimaadka » 5 shay oo ay tahay inaad sameyso maalin kasta si aad u caafimaad qabtid
Jimicsiyada lagu sameeyo qolka jimicsiga oo aad u dhameystiran